ထမင်းမစားရ တာရက်အတော်ကြာတဲ့အထိ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေကြရတဲ့ ပြည်သူ တွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာတွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သန္တာလှိုင် – Cele Oscar
March 30, 2021 By L YC News
အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သန္တာလှိုင် ကတော့ မိသားစုလိုက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို အားကြိုးမာန်တတ် လုပ်ဆောင်နေပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ကာ အဖက်ဖက်ကနေ ပါဝင်အားဖြည့်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ လှူဒါန်းမှုတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူမကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပင်ပန်းနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာတွေပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ဒုတိယအကြိမ် လှူဒါန်းမှုဖြစ်တဲ့ အဆိုပါအလှူကိုတော့ အခက်အခဲ တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပြီး တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ဒလဖက်အခြမ်းအနီးနားရွာက ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေ ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ထမင်းမစားရတာ ရက်အတော်ကြာတဲ့အထိ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြရလို့ ယူလာတဲ့အထုတ်တွေတောင်မလောက်ငှခဲ့ဘဲ ကလေးသူငယ်နဲ့ မိသားစုဝင် များနေတဲ့အိမ်တွေ၊ အဖိုးအဖွားအိမ်တွေကို ဦးစားပေးလှူ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အားတင်းထားဖို့ပြောရင်း ထပ်မံလှူဒါန်းဦးမယ့်အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြထားပါ သေးတယ်..။”T Fitness မိသားစုဝင်များ ကိုယ်စား အားလုံး ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုနဲ့ ဒုတိယအကြိမ် အကူအညီလိုသူများထံ ပံ့ပိုးမှုလေး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတခါတော့ ဒလဖက်အခြမ်းနဲ့ အနီးနားက ရွာတွေက တကယ် အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေကို မေးမြန်းပြီး ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထမင်းမစားရတာ ရက်အတော်ကြာတဲ့အထိ ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့ သိရပြီး ယူလာတဲ့ အထုတ် တွေတောင် မလောက်ခဲ့လို့ ကလေးသူငယ်နဲ့ မိသားစုဝင်များနေတဲ့အိမ်တွေ၊ အဖိုးအဖွားအိမ်တွေကို ဦးစားပေး ခဲ့ပါတယ်။ အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို အားတင်းထားကြဖို့ အားပေးရင်း မကြာခင် ထပ်မံပံ့ပိုးနိုင်ဖို့လည်း ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။
T Fitness မိသားစုဝင်များနဲ့အတူ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့၊ လုပ်အားဖြည့် ကူညီခဲ့ကြတဲ့ ဗိုလ်ရာညွန့်မိသားစုများနှင့် ယောမင်းကြီး လူငယ်များ၊ ပါဝင်ကူညီကြသူများ အားလုံးအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ ရဲ့ အခြေခံ Basic Human Rights ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး Health & Fitness ကိုလည်း လက်လှမ်းမှီ ရယူနိုင်ဖို့ T Fitness Application ကို အခမဲ့ အသုံးပြုရန် code နံပတ်လေးနဲ့ အချိန်အကန့် အသတ်မရှိ ဖွင့်ပေးထားပါတယ်နော်၊အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် !. .” ဆိုပြီး အလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီး သန္တာလှိုင်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ ကနေ အသိပေးပြောပြထားတာပါ..။
သတင်းအရင်းမြစ်: Thandar Hlaing သန္တာလှိုင် Fb Acc
အောငျမွငျမှုတှအေခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ သန်တာလှိုငျ ကတော့ မိသားစုလိုကျလူထုလှုပျရှားမှုတှကေို အားကွိုးမာနျတတျ လုပျဆောငျနပွေီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရပျတညျကာ အဖကျဖကျကနေ ပါဝငျအားဖွညျ့နသေူပဲ ဖွဈပါတယျ..။တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ လှူဒါနျးမှုတှကေိုလညျး လုပျဆောငျနတေဲ့ သူမကတော့ လကျရှိအခွအေနတှေကွေောငျ့ စားဝတျနရေေးခကျခဲပငျပနျးနကွေတဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ စားနပျရိက်ခာတှပေေးဝလှေူဒါနျးခဲ့တာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
ဒုတိယအကွိမျ လှူဒါနျးမှုဖွဈတဲ့ အဆိုပါအလှူကိုတော့ အခကျအခဲ တှနေဲ့ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ကွေရပွီး တကယျလိုအပျနတေဲ့ ဒလဖကျအခွမျးအနီးနားရှာက ပွညျသူတှအေတှကျ စားသောကျကုနျတှေ ပေးဝလှေူဒါနျးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ..။ထမငျးမစားရတာ ရကျအတျောကွာတဲ့အထိ စားဝတျနရေေးခကျခဲနကွေရလို့ ယူလာတဲ့အထုတျတှတေောငျမလောကျငှခဲ့ဘဲ ကလေးသူငယျနဲ့ မိသားစုဝငျ မြားနတေဲ့အိမျတှေ၊ အဖိုးအဖှားအိမျတှကေို ဦးစားပေးလှူ ဖွဈခဲ့ပွီး အားတငျးထားဖို့ပွောရငျး ထပျမံလှူဒါနျးဦးမယျ့အကွောငျးကိုလညျး ပွောပွထားပါ သေးတယျ..။”T Fitness မိသားစုဝငျမြား ကိုယျစား အားလုံး ဝိုငျးဝနျးကူညီမှုနဲ့ ဒုတိယအကွိမျ အကူအညီလိုသူမြားထံ ပံ့ပိုးမှုလေး အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီတခါတော့ ဒလဖကျအခွမျးနဲ့ အနီးနားက ရှာတှကေ တကယျ အကူအညီလိုအပျနတေဲ့ နရောတှကေို မေးမွနျးပွီး ပံ့ပိုးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ထမငျးမစားရတာ ရကျအတျောကွာတဲ့အထိ ဒုက်ခရောကျနကွေတယျလို့ သိရပွီး ယူလာတဲ့ အထုတျ တှတေောငျ မလောကျခဲ့လို့ ကလေးသူငယျနဲ့ မိသားစုဝငျမြားနတေဲ့အိမျတှေ၊ အဖိုးအဖှားအိမျတှကေို ဦးစားပေး ခဲ့ပါတယျ။ အကူအညီလိုအပျနသေူတှကေို အားတငျးထားကွဖို့ အားပေးရငျး မကွာခငျ ထပျမံပံ့ပိုးနိုငျဖို့လညျး ကတိပွုခဲ့ပါတယျ။
T Fitness မိသားစုဝငျမြားနဲ့အတူ ပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့ကွတဲ့၊ လုပျအားဖွညျ့ ကူညီခဲ့ကွတဲ့ ဗိုလျရာညှနျ့မိသားစုမြားနှငျ့ ယောမငျးကွီး လူငယျမြား၊ ပါဝငျကူညီကွသူမြား အားလုံးအတှကျလညျး ဂုဏျယူပါတယျ။ကြှနျမတို့ ပွညျသူတှေ ရဲ့ အခွခေံ Basic Human Rights ဖွဈတဲ့ ကနျြးမာရေး Health & Fitness ကိုလညျး လကျလှမျးမှီ ရယူနိုငျဖို့ T Fitness Application ကို အခမဲ့ အသုံးပွုရနျ code နံပတျလေးနဲ့ အခြိနျအကနျ့ အသတျမရှိ ဖှငျ့ပေးထားပါတယျနျော၊အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ !. .” ဆိုပွီး အလှူနဲ့ပတျသကျပွီး သန်တာလှိုငျက သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာ ကနေ အသိပေးပွောပွထားတာပါ..။
သတငျးအရငျးမွဈ: Thandar Hlaing သန်တာလှိုငျ Fb Acc